Kala soco Qaybta Suuqa Browser Share ka Colts.com | Martech Zone
Monday, August 27, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Markii aan ku qoray boostada ku saabsan Wadaag Suuqa Suuqa, jawaab celin badan oo ku saabsan boostada ayaa ahayd inaanan aaminin tirakoobka W3Schools.com. Runtii waxaan su'aal ka keenay jawaab-celintaan… maxaa adduunka tirakoobkiisu si weyn ugu kala duwanaan karaa degel illaa degel?
Waa hagaag, mahadsanid kuwa wax ku darsaday… Waxaan ogaaday inay runti muhiim tahay! Waxaan u tuuray saaxiib fiican Pat Coyle emayl oo waxaan weydiiyay inuu diyaar u yahay inuu la wadaago tirakoobyada qaarkood Colts.com. Fikirkeygu wuxuu ahaa taageere isboorti oo jecel inuu aad uga duwan yahay qof booqda degel ku saabsan Teknolojiyada Websaydhka oo wuxuu noqon lahaa koox isbarbardhig wanaagsan oo lagu cabbiro. Oo waxay ahayd! Tirakoobyada soo socda waxay ku saleysan yihiin 870,000 ee ugu dambeysay ee soo booqda Colts.com:
Colts.com Booqdaha Soodhawaynta Suuqa Share:
Colts.com Booqdaha Soodhawaynta Suuqa Booqdaha - Guudmarka:
Yaa ogaa ?! Waxaan fiiro gaar ah u yeelan doonaa tirakoobka wadaagista biraawsarka madaxa banaan wixii hada ka dambeeya markaan daawado halkii aan ka fikiri lahaa guud ahaan saamiga suuqa. Xusuusin dhinac ah, waa kuwan stats ee bloggeyga bishii ugu dambeysay. Waligay runti kamaan eegin iyaga ka hor, laakiin waxaad arki doontaa farqi aad u weyn!
Xogta Tixraaca ee booqdayaashayda:
Suuqgeynta Tooska ah wey Isbadashay - Mana ahan Xeerka 40/40/20
Waan maqlay tan sidoo kale, inkasta oo ay macno samaynayso, mid baa odhan kara in degel kastaa abuuri doono barowsar ka duwan kuwii hore oo gaar ah awgood. Waxaan jeclaan lahaa in aan ka fikiro in haddii aad dhammaan istaatistikyada aad u qaadato websaydhada ugu caansan oo aad isku darto, waxaad heli doontaa waxa ay heleen. (Aniguba iskama aanan hubin isha ay ka helaan xogta).
Waan ogahay in boggag badan oo internetka wax lagu qoro loo yaqaan 'Firefox', laakiin Colts ayaa hela tirada guud.
Xog weyn ayaa la dejiyay, waad ku mahadsantahay wadaagista. Garaafyo fiican, sidoo kale 🙂
LA Headshot Sawir
Waxay ila tahay aniga dadka baloogyada akhriya inay u badan yihiin inay adeegsadaan Firefox. Marnaba ma adeegsado Internet Explorer intaas aad u badan. Waan hubaa in guud ahaan dadku ay badanaa isticmaalaan.
Waa wax xiiso leh inay taasi noqon karto… laakiin xogtu waxay bixinaysaa caddeyn inaad sax tahay!
Waan ku faraxsanahay inaad tan dib ugula soo noqotey stats kala duwan W3Schools, waxaan ku sigtey inaan ku qoro faallo kulul boostadaas!
Qodobka runtii lagu daah furay halkan waa in tirooyinka kaliya ee muhiimka ah ay yihiin kuwa loogu talagalay barta aad ka fiirsaneyso waqtigaas. Haddii tusaale ahaan boggaaga ama goobta Colts midkoodna uusan ka shaqeyn IE, Colts-ka ayaa lahaan lahaa dhibaatooyin aad uga badan idinka. Bog kasta waa inuu la shaqeeyaa dhagaystayaashiisa iyo daalacashada ay adeegsadaan.
Iyada oo ah cabirka guud ee wadaagista biraawsarka xilligan, kaliya si aan u arko sida ay Mozilla u socoto, waxaan jeclaan lahaa inaan arko stats-ka biraawsarka Google!
Guy Qalabka PC
Agoosto 30, 2007 saacaddu markay ahayd 8:37 PM
Geeks-yada kombiyuutarka ayaa si cad u adeegsada Firefox in ka badan celceliska shmoe. Waxaan isticmaalaa labadaba. Kaliya waxaan isticmaalaa IE hadda cuz waan la qabsaday, laakiin waxaan si tartiib tartiib ah ugu sii siqayaa dhanka Firefox. Gaar ahaan waqtiyadii ugu dambeeyay ka dib markii ay ku dhacday malware laba jeer hal bil gudaheed adoo isticmaalaya IE.
Sep 10, 2007 at 9: 58 AM
Waad ku mahadsan tahay qoraalkan! Dhammaan wixii aan arkay illaa maanta waa tirakoobyada laga helo goobaha culus ee tiknoolajiyadda, sidaas awgeed adeegsadayaashu waxay u badan tahay inay leeyihiin go'aan sare iyo baare kale oo aan ahayn IE. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko waxa xalka avg-ga ee colts.com uu yahay… Runtii waxaan rabaa inaan ka fogaado ujeedo 800x oo aan u isticmaalo 1024x aasaaskeyga